Iimpawu zonyango zemifuno yemifuno
Ijusi ezivuno zibhekwa njengeluncedo ngakumbi kunezityalo zerayisi, kuba zingenayo inqwaba ye-fructose, zingadliwa ngabantu abaphethwe zizifo ezinxulumene nokufana neswekile: iswekile, u-hypoglycemia kunye nabanye. Ukusebenzisa rhoqo izityalo zemifuno, wenza igalelo elikhulu kwimpilo yomzimba wakho. Iipropati zokuphilisa zemifuno yemifuno ziyaziwa ixesha elide. Ijusi ingacaciswa ukususela kwiphina imifuno, kwaye nganye ilungile ngendlela yayo. Ngoko ke, ndincoma ukuthetha ngeentsholo zeemifuno ngokubanzi. Ukuqala ngoku siza kuqwalasela izixhobo zonyango jikelele zeejusi zemifuno:
- iindiza ezivela kwimifuno eluhlaza equkethe i-chlorophyll, ihlambulule isibindi sethu, kwaye inokunceda neekresela, eziqinisekisiwe uphando lwezesayensi;
- uncedo ukususa i-toxins nezinye izinto eziyingozi ezivela emzimbeni;
- iindiza zemifuno ziqukethe iivithamini ezininzi, amaminerali kunye nezinye izondlo;
- Iindiza zengqolowa ziqulethe amayeza, kunye nee-antibiotic;
Iipropati zokuphilisa iimfuno zemifuno zingabalwa ngonaphakade. Ndicinga ukuba kulungile ukuthetha ngamanye amajusi asetyenziswa ngokuqhelekileyo.
Ijusi ye-carrot iluncedo kakhulu emehlweni, inceda ukunceda amazinyo, kuphuculwe isondlo kunye nokutya. Iqukethe iivithamini A, B, C, E, K, kunye ne-potassium, i-calcium, i-magnesium, isinyithi, i-chlorine.
Ijusi entsha yamatamatisi inomdla kakhulu kwiinkqubo zokuxilisa umzimba. Kodwa, ngelishwa, ngokwenene siphuza ijusi yetekisi enomthi, olahlekelwe ezinye zezilwanyana zonyango. Kulo jusi kuninzi ikhalsium, i-sodium, i-magnesium, i-thiamine.
Ijuba lekhukhamba yiyona ndlela ihamba phambili yendalo. Kwakhona kunceda ukuqinisa amazinyo, iinwele kunye nezipikili, kuba ine-calcium eninzi.
Ijusi le-celery inotye kwi potassium, i-calcium, i-sodium. Ukunciphisa uxinzelelo lwegazi, kunceda ukulwa nemigraines, kuthintela ukuphuhliswa kweeseli zomhlaza. Ngomlilo oshushu, i juice yelitroli iyicima ngokupheleleyo ukoma!
Ijusi ye-Beet iquka iivithamini A, C, B1, B2, B3, calcium, magnesium, phosphorus, potassium kunye ne-sodium. Inceda ekubunjweni kweeseli ezibomvu zegazi kunye nokuphucula igazi ngokubanzi. Kwaye kwakhona: unceda ngezifo zesisu, isibindi, isisu, ulwa nomdlavuza kunye ne-anemia, eluncedo kubasetyhini ngexesha leengxaki zokusesikweni.
Khumbula ukuba kulungele ukusela isantya semifuno esitsha esicacisiweyo, kuba kwinto esithengiswa kuyo ezitolo, kukho izityalo ezincinci, kwaye ngenxa yoko, akukho zakhiwo ezinjalo zokuphulukisa!
Yintoni ebangela ukungabikho kwintsimbi emzimbeni
Lobster okanye lobster
Iimpawu ezisetyenziswayo ze-arugula
I-orange jelly kunye ne-chocolate mousse
I-Alaska pollack kwi-batter
Indlela yokubuyisela emva kweeholide?
Kutheni kunzima ngathi ukuthetha ngesondo kunye nomnye?
I-Vitamin isiselo "Blueberry"
I-casserole edibeneyo kunye nomzimba ogqithisiweyo
I-horoscope yangempela yeveki ka-Oktobha 30-Novemba 5, 2017
Indlela yokuphatha i-otitis kwintsana?